Bandhigga Dhaqanka iyo Farshaxanka Caalamiga ah ee Livingstone ayaa loogu talagalay inuu tamariyo tamarta dalxiisayaasha & dadka deegaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » Bandhigga Dhaqanka iyo Farshaxanka Caalamiga ah ee Livingstone ayaa loogu talagalay inuu tamariyo tamarta dalxiisayaasha & dadka deegaanka
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Shirka Warka Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Zambia War Deg Deg Ah
Bandhigga Dhaqanka iyo Farshaxanka Caalamiga ah ee Livingstone (LICAF) wuu soo laabtay, xafladduna waxaa ka buuxa dhacdooyin aad u wanaagsan oo dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka u siinaya wax ay sanad kasta rajeeyaan.
Wakaaladda Dalxiiska ee Zambia (ZTA) ayaa dejisay taariikhaha LICAF ee bisha May 24-26, 2018. Barnaamijka xafladda ayaa ah mid aad u xiisa badan sidii waligiisba iyadoo munaasabadaha ay ka mid yihiin bandhig faneedyo ay soo bandhigayaan kooxo dhaqameedyo kala duwan ilaa dabaaldegyada waddooyinka iyo isku xidhka is biirsiga.
ZTA waxay la shaqeysay Breweries-ka Zambia si loo hubiyo in Livingstone ay tahay waxqabad buuxa inta lagu jiro Maalinta Xorriyadda dhammaadka usbuuca. Wadashaqeyntan ayaa u oggolaan doonta kaqeybgalayaasha inay daawadaan kooxaha dhaqamada kala duwan ee ka kala socda dhamaan 10ka gobol ee Zambia, kuna raaxeysanaya cunnooyinka hidaha iyo dhaqanka ee Zambiya, uguna dambeyso laakiin uguyaraan si loogu dabaaldego maalinta onkodka oo laga buuxin doono waxqabadyo xiiso leh.
Dabaaldegyadu waxay ku bilaaban doonaan Cocktail rasmi ah oo la furayo fiidkii 24-ka Maajo, oo ay ku xigto waayo-aragnimo qiiro leh Maajo 25. Hawlaha maalintaas waxaa ka mid noqon doona dhadhaminta cuntada dhaqanka, bandhigyada dhaqanka, iyo Maalinta Onkodka. Maajo 26, maalinta ugu dambeysa ee ciida, bandhig dhaqameedka waxaa loo keenayaa jidadka iyadoo qoob-ka-ciyaarayaashu ay ku dhex wareegayaan Livingstone socod naxdin leh oo dhererkiisu yahay 3-kilomitir iyada oo loo marayo magaalada Livingstone.
Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxaa jiri doona qaansoroobaad dayax-madoobaadka Victoria Falls Axadda, Maajo 27. Daawashada waxay socon doontaa laga bilaabo 2024-0018 saacadood goobta Victoria Falls.